हेर्दाहेर्दै जहाज यसरी भयो खरानी, किन बचाउन सकिएन धेरै यात्रु? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
हेर्दाहेर्दै जहाज यसरी भयो खरानी, किन बचाउन सकिएन धेरै यात्रु?
किन बचाउन सकिएन धेरै यात्रु ?
विमानस्थलभित्रै भएको दुर्घटनामा पनि धेरै यात्रुले ज्यान गुमाए । सामान्यतया विमानस्थलभित्र आकस्मिक अवस्थामा उद्धारका लागि सबै उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा हुन्छन् । विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार चालकले इमर्जेन्सी घोषणा नगरेका कारण ‘ग्राउन्ड’मा रहेका दमकल र एम्बुलेन्सलाई तत्काल परिचालन गर्न सकिएन । जहाज दुर्घटनास्थलनजिकै नेपाली सेनाको उद्धार टोली रहेकाले दमकलले दुर्घटनालगत्तै आगो निभाउन थाले पनि एम्बुलेन्स भने करिब १० मिनेटपछि पुगेका थिए ।
हेर्दाहेर्दै जहाज यसरी भयो खरानी
सिजन बयम्बु, प्रत्यक्षदर्शी
म विमानस्थलमा ‘लाइट’ गाडी चलाउँछु । सोमबार दिनको २ बजेतिर डोमेस्टिक एभियसनतर्फको मूलगेटमै थिएँ । माथिबाट चट्याङ परेजस्तो अवाज आयो । आवाज डरलाग्दो थियो । माथि हेरेँ, ठूलो जहाज रूखै छोला–छोलाजस्तो गरी बत्तिदै गरेको देखेँ । सारै डर लाग्यो । भागौँ झैँ लाग्यो । तर, भाग्न सकिनँ, हेरेर बसेँ ।
जहाज डोमेस्टिक एभियसनतर्फ रहेको सेनाको ब्यारेकमाथिबाट आउँदै थियो । जहाजले ब्यारेकको मूलगेटनजिकै रोपिएको धुपीको रूख झन्डै छोयो । बत्तिँदै डोमेस्टिक एभियसनको छानातर्फ अघि बढ्यो । छाना नै छोला–छोलाझैँ देखियो । तर, छोएन । जहाज अघि बढ्यो।
छानाभन्दा ठीक अघि बत्तीका ठूला–ठूला पोल छन् । जहाज त्यही पोलमा ठोकिएलाझैँ भयो । तर, पोललाई छोएन । जहाज रनवेतर्फ अघि बढ्यो । रनवेमा ल्यान्ड गर्नासाथ ठूलो आवाज निस्कियो । त्यहीवेला कालो धुवाँ पनि सँगै आयो । एकछिनपछि आगो बलेको देखियो, जहाज अघि बढ्यो, तर धुवाँ र आगो आउन रोकिएन । त्यसपछि जहाज दक्षिण–पूर्वतर्फ हुत्तिँदै गयो । केही पर पुगेर रोकिएको देखियो । जहाजबाट अब अवाज आउन बन्द भयो । तर, धुवाँको मुस्लो देखियो । केहीबेर त धुवाँको मुस्लोले आकाश नै ढाक्यो । करिब २० मिनेटसम्म आकाश धुवाँले ढाकेको थियो।
जसले युएस बंगला नेपालमा ल्याए, उनैको ज्यान गयो
दुई वर्षअघि नेपालमा युएस–बंगला एयरलाइन्सको उडान सुरु गराउँदा शंकर पौडेल निकै उत्साही थिए । बंगलादेश हुँदै नेपाललाई अमेरिकासम्मको हवाई रुटमा जोड्न पाएकोमा उनी गर्व गर्थे । पौडेलको नमस्ते ट्राभल कम्पनी नै युएस–बंगला एयरलाइन्सको जनरल सेल्स एजेन्ट (जिएसए) थियो । तर, नेपालमा युएस–बंगला भित्राउने पौडेलले सोही जहाज दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । ‘जसले युएस–बंगला नेपालमा ल्याए, उनै सोही विमान दुर्घटनामा बिते,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा पौडेलका साथी भरतराज आचार्यले भने। नयाँपत्रिकामा खबर छ।
विप्लवका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान
मधेस झरेपछि किन मौन छन् सिके राउत?
निर्मला पन्त प्रकरण : बयान नसकिएपछि एसपी डिल्लीराज विष्ट प्रहरी नियन्त्रणमा
होलीमा तीन हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित
एक व्यक्ति जसले गाउँलेलाई ऋणमा डुबाएर भागे
आज फागु पर्व होली मनाइँदै, किन मनाईन्छ होली?
ओलीलाई अमेरिकाको शुभकामना
जापान, कोरियाको भाषा पढाउने वाहानामा मनपरी शुल्क असुल्दै
३३ किलो प्रकरणमा गलत आदेश दिने ८ न्यायाधीशविरुद्ध बृहत छानबिन
जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई लखेट्ने विप्लव समूहको उद्घोष
२०७५ चैत ०६, बुधबार
शक्तिशाली बन्दै प्रधानमन्त्री: सेना परिचालसम्म गर्न सक्ने अधिकार
हङकङमा दुई रेल ठोक्कियो… फेरि अर्को दुर्घटना रेलमुनि फसिन् एक महिला
यूकेबासी बाँसुरीवाधकहरुको दोस्रो भेला सम्पन्न
बेलायती नेपालीले म्युजिक फेस्टिबलसहित नयाँ वर्ष मनाउंदै
भेटियो बिप्लव र प्रकाण्डको अड्डा, कहाँ के गर्दैछन्?
पूराना समाचार, लेख रचनाहरुः Select Month March 2019 (127) February 2019 (165) January 2019 (182) December 2018 (174) November 2018 (148) October 2018 (134) September 2018 (149) August 2018 (165) July 2018 (169) June 2018 (174) May 2018 (133) April 2018 (175) March 2018 (148) February 2018 (115) January 2018 (116) December 2017 (110) November 2017 (123) October 2017 (132) September 2017 (120) August 2017 (158) July 2017 (151) June 2017 (129) May 2017 (125) April 2017 (140) March 2017 (129) February 2017 (119) January 2017 (120) December 2016 (122) November 2016 (114) October 2016 (86) September 2016 (108) August 2016 (99) July 2016 (107) June 2016 (121) May 2016 (178) April 2016 (126) March 2016 (112) February 2016 (101) January 2016 (146) December 2015 (175) November 2015 (152) October 2015 (79) September 2015 (86) August 2015 (115) July 2015 (96) June 2015 (129) May 2015 (106) April 2015 (127) March 2015 (155) February 2015 (117) January 2015 (135) December 2014 (132) November 2014 (142) October 2014 (112) September 2014 (157) August 2014 (112) July 2014 (101) June 2014 (65)
Trending Now : ओलीलाई अमेरिकाको शुभकामना